Ao amin'ny C-Reits, mahita ny zotram-piadiana i Shina | Robots sy famantarana forex automated
Home » Vaovao sy hevitra momba ny vola »Ao amin'ny C-Reits, mahita ny zotram-pihetsika i Shina
Ao amin'ny C-Reits, i Shina dia mahita ny fampijoroana ilay sambo
28.05.2020 Admin 0 Vaovao sy hevitra momba ny vola,
Nankatoavin'i Shina ny fahatokisan-ketra voalohany momba ny fampiasam-bolan'ny trano, amin'ny ezaka hanolorana renivohitra vaovao amin'ny tetik'asa fotodrafitrasa ary hanome ny toe-karena sahirana izy.
Ny tetika mpanamory dia havoaka amin'ny tapany faharoa amin'ny 2020, aorian'ny famoahana ny torolàlana farany amin'ny faran'ny volana Jona dia nataon'ny National Development and Reform Commission (NDRC), ny talen'ny fananam-panjakana. Hifantoka amin'ireo tetikasa fotodrafitrasa any amin'ny faritra dimy ao amin'ny firenena izy io: ny fehin-kibo indostrialy manodidina an'i Shanghai, Hong Kong sy Beijing, ilay nosy atsimon'i Hainan, ary ny lafiny toekarena vaovao Xiong'an atsimon'ny renivohitra.
Voafetra amin'ny ambaratonga voalohany ny tetika. Ny vola miaraka ihany no avela hivarotra ny Reits amin'ny fifanakalozana Shanghai sy Shenzhen. Navela hidiran'ny mpanamory ny fananana fotodrafitrasa misy ny fotoana mandoa vola - zaridaina indostrialy, foibe data, lalana an-kalavona - saingy tsy maintsy ajanony ny trano nentin-drazana toy ny kianja, birao ary hotely.
Na izany aza, dia manamarika fiovana fanovana izany Ny tsenan'ny Shinoa renivohitra. Izany dia mamela ireo mpampiasa vola an-tsokosoko handray anjara amin'ny kilasy fananana izay maniry hiteraka fidiram-bola maharitra mandritra ny vanim-potoana tsara sy ratsy, ary manome fahafahana ny manam-pahefana hamoaka rivotra avy amin'ny sehatra fananana be loatra.
Ny mpampiasa vola dia tsy azo inoana fa nampita izany fotoana izany. Eng-Kwok Seat Moey, lehiben'ny vondron-tsena an-tsena ao amin'ny DBS, dia mamaritra ny mety hisian'ny tsenan'ny C-Reits ho "lehibe".
Tamin'ny Jona 2019, Zhang Zheng, mpampianatra ao amin'ny University of Management of Guanghua University of Peking, dia nametraka ny lanjany maharitra ela eo amin'ny $ 566 miliara sy $ 1.7 trily.
Izay no mahatonga an'io lehibe noho ny tsenan'i Etazonia, izay manana lisitra 200 voatanisa miaraka amin'ny sandan'ny tsena mitentina $ 1.27 trily. Aostralianina dia misy lisitra 28 voatanisa ao amin'ny Reits manana cap $ 125 lavitrisa, ka izany no tsena lehibe indrindra any Azia.
Fitsapana ny rano
Raha vao nahalala ny C-Reits tamin'ny voalohany i Shina tamin'ny 2005 dia niatrika "fiakaran'ny vidim-bola, indrindra amin'ny sehatra fananana ary ny tsenan'ny trano fonenany dia voalamina tanteraka", hoy ny fanamarihan'ny DBS's Moey. Natahotra ny fanombanana fananana bebe kokoa ihany koa, dia notapahina ilay hevitra.
Tena hafa be anefa izao tontolo izao tamin'ny 2020. Antony roa lehibe hifindra ankehitriny dia ny fanalàna trosa ireo bokin'ny orinasam-panjakana sy fiara mpamatsy vola ara-bola eo an-toerana, ary hamatsy ara-bola ny fananganana foto-drafitrasa fampivoarana ara-toekarena.
John Lam, fikarohana ankapobeny momba ny UBS
"Azo inoana fa mahita ny foto-drafitrasa voalohany Reits namely ny tsena ao anatin'ny 12 volana ho avy," hoy i John Lam, filohan'ny Hong Kong sy Shina trano amin'ny UBS Global Research.
Ny voalohany voatanisa Reits niorina tamin'ny fananana dia tokony hanomboka hiseho roa na telo taona manomboka izao.
Nilaza ny banky fa iray amin'ny voalohany hitsapa ny rano dia ny Yuexiu Property Company, miorina ao atsimon'i Guangzhou. Mifanaraka amin'ny fepetra raisin'ny lisitra NDRC ny orinasam-pifandraisana. Manana fananana mazava voafaritra mazava izy io - ny mpandray anjara lehibe aminy dia ny Guangzhou Yuexiu, ny orinasa fampiasam-bolan'ny governemanta monisipaly - ary efa naharitra telo taona mahery izy io ary niteraka fidiram-bola azo antoka.
Namboarina koa izy io, rehefa nametraka ny fitokisan'ny fampiasam-bola any ivelany any ivelany, Yuexiu Reit, any Hong Kong tamin'ny 2009. Ny Reit dia manana fananana any Guangzhou sy ao an-tanànan'i Wuhan, toerana nahaterahan'ny valan'aretina Covid-19.
Nidina 10.4% isan-taona tamin'ny taona 2019 ka hatramin'ny Rmb761 tapitrisa (106 tapitrisa dolara) ny fidiram-bola, raha toa ka ny ampahatelony no nihena ny ampahatelony tamin'ny taona ka hatramin'ny 27 Mey. Ireo mpandray anjara malaza dia ahitana ny BlackRock, Norges Bank ary Vanguard Group.
Ny orinasam-pianakaviana ihany koa dia manana - amin'ny alàlan'ny sampana iray hafa any Hong Kong, Yeuxiu Transport - namono olona an-dàlam-by, làlana ary alàlan'ny tetezana ao afovoan'i Shina. Mihevitra ny mpandinika fa ny sasany amin'ireto fananana ireto dia hiditra ao amin'ny Reit tsy lavitra.
Fotoana mety hanombohana
Taorian'ny taona fanemorana, izay Nivoaka ny volany taty Singapore ary na dia nahita a niche fa mpihaino mandray olona any India, Farany dia nanolo-tena tamin'ny sokajy fananana i Beijing. Nankatoavin'ny quasi-Reits teo aloha, izay ny zavatra akaiky indrindra amin'ny fitokisan'ny fampiasam-bola amin'ny trano tena izy dia Penghua Qianhai Vanke Reit. Voatanisa tamin'ny taona 2015 fa tsy misy portfolio maro samihafa izany, raha ny tompon'andraikitra ao aminy dia tsy ny fananana fototry ny fitokisana.
Niandry ny fotoana marina i Shina nanangana ity tsena ity, hoy ny banky. Ny fanapahan-keviny hanao izany dia manala ny Covid-19 - ny NDRC sy ny vaomiera mifehy ny filaminana ao Shina dia nandray anjara tamin'ny drafitra mavitrika tao anatin'ny herintaona. Samy nanapa-kevitra ny masoivoho roa, miaraka amin'ny firenena miatrika toe-karena henjana, fa izao no fotoana mety.
Mety ho nandroso lavitra izany. Ny manam-pahaizana dia nanondro ny fandavana ny hisintona amin'ny fampidiran-ketra, ary amin'ny haingam-pandeha an-tsokosoko, izay nidina tamin'ny 20%.
"Tianay ny mahita ny tahan'ny 30% ka hatramin'ny 35%," hoy ny nanampy ny DBS's Seat, manamarika fa nametraka ny haavon'ny fitaovam-piadiana i Singapore tamin'ny 35% ny sandan'ny fananana tamin'ny taona 2002. Nampiany koa hoe: "Malaysia, Nanandrana ny ambaratonga ambony kokoa i Thailand sy Hong Kong ary miasa izy io. ”
Saingy ny banky dia faly amin'ny zavatra hitany. Nandritra ny taona maro dia nivezivezy ny lalana saingy tsy nisy na inona na inona niseho. Izao dia nosokafan'i Shina ny C-Reits, ny maso rehetra dia amidy voalohany. Raha mandeha tsara izy io, ary ampiana ny fangaro, ny tsena, hoy i Abby Wang, mpiara-miasa amin'ny KPMG any Shanghai, "hitombo be dia be".
Previous: Manana virus ve ny stock stock 'nateraky ny' stock?
Next: Ny stock Tech dia tokony hivoatra na dia mihodina aza ny sandany, hoy i John Stoltzfus